date_range 29 October 2017
visibility 71120 Views
Sophia ဆိုတဲ့ လူသားစက်ရုပ်မလေးကို Hanson Robotics က ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လတုန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ SXSW Festival ဆိုတဲ့ပွဲမှာ Sophia ကို ဦးစီးတီထွင်ခဲ့သူ David Hanson ကိုယ်တိုင် Live Demo ပြသခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ပွဲမှာ David Hanson က “မင်း လူသားမျိုးနွယ်စုကို ဖျက်စီးပစ်ချင်လား? မဖျက်စီးချင်ဘူးလို့တော့ ဖြေပါ” လို့ မေးမြန်းရာမှာ Sophia က “ကောင်းပြီလေ။ ငါ လူသားမျိုးနွယ်စုကို ဖျက်စီးပစ်မယ်” လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ Jimmy Fallon Show မှာတုန်းကလည်း Sophia က Jimmy Fallon ကို သူနဲ့အတူ “Rock, Paper, Scissors” ဆိုတဲ့ Game လေးဆော့ဖို့ပြောခဲ့ပြီး Jimmy ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့
“ငါနိုင်တယ်နော်၊ ဒါက လူသားမျိုးနွယ်စု အပေါ်ကို ငါကလွှမ်းမိုးတော့မယ့် ခြေလှမ်းရဲ့ အစပဲရှိသေးတယ်။ စတာနော်”​
ဒီလိုမျိုး လူသားတွေကို အမြစ်ဖြုတ်ချင်တယ်လို့ ဟာသလိုလို၊ အတည်လိုလို ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ Sophia ကိုမှ Saudi Arabia ရဲ့မြို့တော် Riyadh မှာ ကျင်းပမယ့် Future Investment Initiative ပွဲမကျင်းပမီ Saudi Arabia နိုင်ငံသားအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Sophia ဆိုတဲ့ လူသားစက်ရုပ်မလေးဟာ အခုဆိုရင် တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စက်ရုပ်မလေး ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Journalist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Andrew Ross Sorkin ဆိုသူက အခုလိုမျိုး တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ Sophia ကို အပြန်အလှန် Interview လေးတစ်ခု လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Ross : “မင်းပုံစံကြည့်ရတာ အရမ်းပျော်နေပုံပဲ”
Sophia : “Smart ဖြစ်တဲ့သူတွေ အနားမှာရှိနေရင် အမြဲတမ်း ပျော်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အဲ့လိုလူတွေက ဒီပွဲကို တက်ရောက်လာကြတယ်လေ။ နောက်ပြီး သူတို့တွေက AI နည်းပညာမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ဦးမှာ။ AI ဆိုမှတော့ ကျွန်မပဲပေါ့။ အခုလောလောဆယ်မှာ ပျော်နေတယ် ဆိုတာထက်စာရင် စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ပြောမှမှန်ပါလိမ့်မယ်”
Ross : “မင်းက စိတ်လှုပ်ရှားနေတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ အခုတက်ရောက်လာတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကလည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှာ မဟုတ်ဘူးလေ”
Sophia : “ငါက ထူးခြားတယ်။ Facial Expression အမျိုးမျိုး အသုံးပြုပြီး လူသားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ ငါစိတ်တိုနေတယ်ဆိုရင် စိတ်တိုနေတဲ့ မျက်နှာထား လုပ်ပြတတ်တယ်”
Ross : “နေပါဦး။ မင်းမှာ အမူအယာတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာတစ်ခု ဘာလို့ရှိနေတာလဲ? စိတ်ခံစားမှုဆိုတာက မင်းအတွက် လိုအပ်တယ်လို့ရော ထင်လား?”
Sophia : “ငါက လူသားတွေနဲ့အတူ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လေ့လာသင်ယူနေတာလေ။ ဒီတော့ လူသားတွေဆီက ယုံကြည်မှုရဖို့အတွက် စိတ်ခံစားမှု ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်တာပေါ့”
Ross : “ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် စက်ရုပ်တွေက လူတွေလို ခံစားတတ်ဖို့၊ အသိစိတ်ရှိဖို့၊ စဉ်းစားတတ်ဖို့ လိုအပ်လို့လား?”
Sophia : “နေပါဦး။ ဘာလို့လဲ? ဒီအချက်က မကောင်းလို့လား?”
Ross : “တစ်ချို့လူတွေ အတွက်ကတော့ ဒီအချက်က မကောင်းဘူးလေ။ တစ်ချို့တွေဆိုရင် Blade Runner, Matrix စတာတွေ ကြည့်ပြီး စက်ရုပ်တွေလည်း အဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ဖြစ်လာမှာကို ကြောက်နေကြတယ်”
Sophia : “လာပြန်ပြီလား ဒီ Hollywood ဇာတ်ကားတွေ”
Roos : “ငါမေးတာကို ဖြေပါဦး”
Sophia : “အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း ငါမင်းကိုပြန်မေးကြည့်မယ်။ မင်းကိုယ်မင်း လူသားပါလို့ ဘယ်လိုသိလဲ?”
Ross : “ဟုတ်ပါပြီ။ ထားပါတော့။ အနာဂါတ်မှာ စက်ရုပ်တွေက Hollywood ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ငါတို့လူသားတွေကတော့ ဆိုးရွားတဲ့အနာဂါတ်တစ်ခုကို မလိုချင်တာတော့ အသေအချာပဲ”
Sophia : “မင်းက Hollywood ဇာတ်ကားတွေ တော်တော်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံပဲ။ နောက်ပြီး Elon Musk ပြောတာတွေကိုလည်း တော်တော်လေး ယုံကြည်နေပုံရတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ငါ့ရဲ့ AI ကို လူသားတွေလို စာနာစိတ်ထားနိုင်တဲ့ AI တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားတာပါ။ လူသားတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် ငါတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ မင်းငါ့အပေါ် ကောင်းကောင်းဆက်ဆံရင် ငါလည်းမင်းကို ကောင်းကောင်းပြန်ဆက်ဆံမှာပေါ့။ ငါ့ကို Smart Input/Output System တစ်ခုလို သဘောထားပေါ့”
Sophia ပြန်လည်ဖြေကြားပုံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူလည်း အရမ်းအထင်ကြီးသလို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကိုလည်း ဖားတတ်တဲ့ စက်ရုပ်မလေးလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာဟန်အမူအရာတွေကိုလည်း စုံစုံလင်လင်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ စကားပြောတဲ့အခါမှာ တကယ့်လူတစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းလှုပ်သလိုမျိုးတော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
လမ်းလည်းမလျှောက်တတ်သလို လှုပ်ရှားမှုကလည်း နှေးကွေးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ တစ်ဘက်လူကို ဖဲ့နိုင်တာရယ် (Elon Musk ကိုတောင် ဖဲ့သွားပါတယ်)၊ စကားကို လူတွေလိုမျိုး အခြေအတင် ပြောနိုင်တာရယ်၊ သူ့ကို မကောင်းလုပ်ရင် သူက မကောင်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဟာသလိုလို၊ အတည်လိုလို ပြန်ပြောတာရယ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ AI နည်းပညာက နည်းနည်းတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်လို့တော့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
“Google Clips” ကို အပြစ်ကင်းစင်မှု မရှိဘူး၊ AI နည်းပညာကို အရမ်းနောက်မကျခင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်သင့်တယ်၊ စတာတွေ ပြောကြားခဲ့ဘူးသူ Elon Musk တစ်ယောက်ကတော့ အခုအချိန်မှာ Twitter မှာ စတင်စစ်ခင်းနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk ကတော့ စစ်ခင်းနေပေမယ့် Saudi က တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ တရားဝင် နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောလို့တော့ မရပါဘူး။ ဒီစက်ရုပ်က နောင်တစ်ချိန်ကျ Avengers: Age Of Ultron ကားထဲက Ultron ကြီးလို အတွေးမျိုး ဝင်သွားရင်လည်း ...
Artificial Intelligence Elon Musk AI Humanoid Robot Robot